Somalia: Xildhibaano mar kale Mooshin ka keeney Madaxweyne Xasan Maxamuud - Wargane News
Home Somali News Somalia: Xildhibaano mar kale Mooshin ka keeney Madaxweyne Xasan Maxamuud
Xildhibaano gaaraya 54 Xildhibaan ayaa saxiixay Mooshin ka dhan ah Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud, waxaana ay ku eedeeyeen in uu marar badan jabiyey dasruurka dalka u yaala. Xildhibaanada ayaa maanta u gudbiyey Mooshinka shirguddoonka Baarlamaanka.
Fadhi ay maanta isugu yimaadeen Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka, yaa Afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya Maxamede Shiikh Cismaan Jawaari sheegey in uu gacanta ku hayo Mooshin ay saxiixeen Xildhibaano ka badan 50, waxaana ay doonayaan in aga doodo Mooshin ka dhan ah Madaxweynaha. Jawaari ayaa sheegay in maalmaha soo socda la horkeeni doono baarlamaanka Mooshinkaas.
Xildhibaan Maxamed Cabdi Yusuf oo kamid ah Xildhibaanada saxiixey Mooshinkan ayaa sheegay in Madaxweynuhu jebiyey dastuurka una gefey xasaanadda Xildhibaanada Soomaaliyeed.
Marar badan oo hore oo Xildhibaano ay Madaxweynaha ka keeneen Mooshin ayaa socon waayey, waxaana Mooshinkaas la diley isaga oo aan gaarin ka doodid.
Maalintii shalay ayaa Madaxweynuhu Xildhibaanada u jeediyey khudbad uu uga hadlaayo amaanka dalka, doorashooyinka 2016 iyo dhaqaalaha dalka, Xildhibaanadu wax su’aalo ah ma weydiin Madaxweynaha.
Uhuru to host President of Somaliland Musa Abdi on Monday